Manchester United Oo U Tartameysa Saxiixa Paulo Dybala
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo u tartameysa Saxiixa Paulo Dybala
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay si xoogan ugu tartameyso saxiixa weeraryahanka Juventus Paulo Dybala .
27 jirkaan ayaa la dhibtoonayay dhibaato jilibka ah oo dhib badan intii lagu jiray ololihii 2020-21, waxaana uu dhaliyay kaliya afar gool 17 kulan oo uu u saftay Old Lady xilli ciyaareedkan.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ay dooneyso inay si deg deg ah u fasaxdo weeraryahankaan, iyadoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo xagaaga 2022.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa u muuqda mid aan qalinka ku duugi doonin qandaraas cusub Turin, taasoo la micno ah in la filayo in lagu iibiyo suuqa soo socda iyadoo kooxda Andrea Pirlo ay ka baqeyso inay beeca xorta ah ku weyso.
Sida laga soo xigtay FC Inter News , Man United ayaa xiiseyneysa saxiixa weeraryahankan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan laakiin diyaar uma ahan inay la kulmaan 60 milyan oo ginni oo u dhiganta 52 milyan oo ginni.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Red Devils ay sidaas darteed isku dayi karto inay kala xaajooto heshiis is dhaafsi ah oo uu ku lug leeyahay Paul Pogba , kaasoo weli lala xiriirinayo inuu ka tagayo Old Trafford.
Dybala ayaa dhaliyay 99 gool wuxuuna diiwaan galiyay 40 kale 245 kulan oo uu u saftay Juve tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Palermo bishii July 2015.